# WohnGut # Central esigodini sase-rose saseSeppenrade - I-Airbnb
# WohnGut # Central esigodini sase-rose saseSeppenrade
# WohnGut # ifakwe ngothando, ikhanya futhi yesimanjemanje, amagumbi ama-2, ifulethi eliwuphahla lwendlu engu-70sqm, enkabeni yeSeppenrade. Ifulethi, 2nd floor. itholakala emgwaqeni ohamba ngezinyawo. Indawo enkulu yokuhlala enombhede osofa basentwasahlobo ophuma ngaphandle, isikrini esiyisicaba kanye nesiteshi sokuqopha umculo. Igumbi lokulala elikhulu elinendawo yokusebenzela ehlanganisa i-WiFi, umsakazo wedijithali kanye nesiphephetha-moya esihambayo asishiyi lutho. Phezulu, igumbi lokugezela elinobhavu weshawa nendawo yokupaka izimoto ezizimele phambi komnyango kuphelele # WohnGut #.
Ingabe sifuna ukuhlala sifushane unomphela?
Ifulethi likunikeza umuzwa wokuza ekhaya uma ungena.
# WohnGut # SchlafGut
Ukulahlwa kwetshe yiLüdinghausen, umhlaba usahlelekile lapho - lapha eSeppenrade, inhliziyo isekhaya! Futhi umphefumulo wesifunda ungabonakala engadini ye-rose. I-idyllic, ifudumele futhi iyacabangela, leyo i-Seppenrade noma ebizwa nangokuthi i-Siäpro.
Uzothola konke okudingayo ukuze uphumule lapha!
Izindlela ezinhle zamabhayisikili nezindlela zokuhamba izintaba, izitolo ezinkulu ekhoneni, indawo yokubhaka ezansi nomgwaqo kanye nokuqhubeka kancane kuma-ammonite amakhulu emhlabeni.
Izindawo zokudlela eziningi eziningi: I-Naundrups Hof, i-Mutter Siepe, i-Gasthaus Sträter kanye ne-pub yedolobhana i-Wember kunconywa kakhulu! Futhi uma indawo iba yincane kakhulu kuwe ngesikhathi sokuhlala kwakho, uzothola 'ukugibela ibhayisikili', kuningi kakhulu!
Kunebhokisi lokhiye endlini, ngakho-ke kukhona ukufika okuguquguqukayo. Noma kunjalo, ngihlala ngifinyeleleka kalula ngocingo.